Dib-u-fiirinta Alaabada Semalt iyo Sida ay kuugu Sayn Kari karaan 10ka ugu sareeya ee raadinta Google
Bogga koowaad ee google wuxuu xukumaa 92% taraafikada. Maxay tani uga dhigan tahay ganacsigaaga? Waxay ka dhigan tahay in SEO ay aad uga muhiimsan tahay sidii hore.
Markaad socodsiineyso meherad, raadinta waxyaabo sida cufnaanta erayga, dib-u-eegida, iyo awoodda raadintu waxay qaadan kartaa waqti badan. Markaad iskudayeyso inaad kajawaabto tan adoo wax ka qabanaya baahida macmiilkaaga, waxay noqoneysaa wax aan macquul aheyn. Ahmiyadani waa sababta aad ugu baahan tahay shaqo go'an oo ka timid koox khabiiro ah oo ku sugan SEO.
Soo Bandhigida Semalt
Semalt waa shirkad dhigtay muhiimadda SEO-ga safka hore. Waxay taageero siiyaan shirkadaha aan lahayn khubarada SEO-ka-dhex ku jirta.
Waxay sidoo kale la shaqeeyaan kuwa aan aqoon SEO-ga iyadoo leh 14 maalmood oo tijaabo bilaash ah oo ah adeegyadooda. Waxay sidoo kale leeyihiin wax soo saar u gaar ah kuwa aan dooneynin inay galaan dhinaca farsamada: AutoSEO.
Samaynta Taariikhdooda Guusha
Semalt waa shirkad ku faani doonta diiwaan raadis la xaqiijiyay. Waxay leeyihiin kiisas badan oo guul ah, kuwaa oo qaarkood u arkaan koror aad u weyn. Marka laga hadlayo qalliinka qalliinka TR, waxay gacan ka gaysteen kordhin 14 jeer ah xaadiritaanka. Waxaad ka arki kartaa faahfaahinta taraafikadahooda hoose.
AutoSEO waxay gelisay shirkadooda 100ka ugu sareysa 179 erey-fure muddo afar bilood ah. Wixii iyaga ku keenay 10ka ugu sarreeya waxay ahayd xirmada FullSEO. Xirmadan ayaa u oggolaatay inay ku garaacaan taraafikadaas 92% ee taraafikada dadka raadinaya adeeggan. Waxaan ka wada hadli doonaa dib u eegis dhameystiran oo ku saabsan shuruudahan dambe, laakiin kiiska fudud waa kan: Semalt wuu shaqeeyaa.
Semalt Waa hay'ad dhammeystiran oo shaqaaleysiisa oo shaqaaleysiisa kooxo kala duwan oo dad ah oo loo dhisay inay wax ka qabtaan shirkad kasta oo u baahan darajo siinta SEO. Iyagu waa urur caalami ah, sidaa darteed waxaad u badan tahay inaad kula hadasho luqad aad wadaago.
Waxaad kula xiriiri kartaa iyaga Skype, WhatsApp, telegram.me, emayl, ama taleefan. Dhammaantiin waxaad ku arki kartaan kooxdooda bogga shaqaalahooda. Xitaa waxaad qaadan kartaa xoogaa daqiiqad ah si aad u bogto quluubtooda.
Haddii aad akhrineyso tan, waxaad u badan tahay inaad daneynaysid SEO. Waxaad noqon kartaa xirfadle madax-bannaan, milkiil ganacsi yar, ama hay'ad suuq suuq geyn.
Si kasta ha noqotee, ma heli doontid meel fog adiga oo aan fahmin qaar ka mid ah bahda jarmalka ee warshadaha.
SEO, ama Raadinta Mashiinka Raadinta, ayaa u dhisaya websaydhkaaga qaab dadku markii ay raadsadaan waqti cayiman ay ku helaan. Shuruudahan, ama ereyada furaha ah, waxay kordhiyaan xaddiga taraafikada boggaaga. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad noqoto dhakhtar qalliin caag ah oo loo yaqaan rhinoplasty, ereyada furahaaga ah waxaa ka mid noqon kara “qalitaanka rhinoplasty” ama “rhinoplasty cheap.”
Algorithm-ka Google wuxuu u dhistaa qaab ay dadka ugu xiriiso websaydhyada habboon, ee awoodda leh. Eeg tusaalaha kore, kaas oo adeegsanaya ereyga "rhinoplasty." Iyagu sidoo kale waa awood leh maxaa yeelay waxay ka yimaadeen ilo lagu kalsoon yahay. Waxay tan u sameyneysaa iyada oo dirito gurguurta, ama bots loo dhisay in lagu sawiro bogagga internetka. Kireystayaashu waxay go'aamiyaan tayada iyagoo ku saleynaya dhowr arrimood oo kala duwan.
Erayada Muhiimka ah waa ereyo ay algorithmku u maleynayaan inay kufiican yihiin qeexida waxaaga.
Dib-u-eegisyada waa tirada isku xirka waxyaabaha ay ka kooban yihiin bogagga kale, gaar ahaan marka shabakadahaas loo tixgeliyo inay yihiin amar.
Dhismaha isku xidhka waa habka loo aasaaso dib-u-xiriirno.
Cabiraadaha Bulshada sida saamiyada iyo dib-u-warshadaynta
Waxaa jira qodobo badan oo badan oo galaya waxa SEO ah, oo kulligood kuma wada geli doonno halkan, laakiin kuwan waxay muhiim kuu noqon doonaan inaad ogaatid inaad fahanto waxa galaya astaamaha Semalt. Bartayada ayaa leh hage dhameystiran oo ku saabsan SEO haddii aad jeceshahay inaad si qoto dheer uga fiirsato maadada.
Sidee Badeecada Semalt u kobcinaysaa SEO-gaaga
Hadda oo aan fikrad fiican ka haysanno waxa aan higsaneyno, waxaan ku dhex geli karnaa alaabooyinka Semalt si cad oo ballaaran. Waxaan diirada saareynaa aagagga laga helo taban wax soo saarkooda si wax loo bilaabo. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Websaydhku wuxuu qeexayaa in AutoSEO loogu talagalay kuwa doonaya inay kordhiyaan isbedelka websaydhkooda, laakiin iyaga oo aan lacag badan gelin. AutoSEO waa badeecada aasaasiga u ah kuwa doonaya inay galaan SEO. Iyada oo 14,000 oo qof in ka badan 192 waddan ay qayb ka yihiin dhiirrigelinta, waxay heshay heshiis wanaagsan oo caan ah.
Sababta weyn ee caannimadan ayaa ah 14 maalmood .99 boqolkiiba tijaabooyin ay bixiyaan. Helitaanka AutoSEO, khabiir ayaa loo xilsaaray akoonkaaga si uu u falanqeeyo bartaada. Khabiirada SEO waxay heli doonaan ereyada furaha ee sida caadiga ah looga isticmaalo warshadahaaga, laakiin gaar u ah inay kugu siiyaan booqdeyaasha raadinaya inay wax iibsadaan.
Semalt wuxuu siiyaa warbixinno qiimeyn ah habka nidaamkooda falanqaynta. Waad arki kartaa sida ay shirkaddaadu sameyneyso adigoo eegaya dashboard-ka, kaas oo ah astaamaha ugu weyn marka la galayo.
Falanqaynta ereyga furaha ee warshadahaaga, hadafka ugu dambeeya ayaa noqon doona in la dhiso xiriirro shabakadaada si loo hubiyo inaad heysato ereyada muhiimka ah.
Waxay kale oo ay adeegsadaan xiriirada xirmooyinka, taas oo u adeegsan doonta isticmaaleyaasha meel gaar ah oo ku taal bogga ku habboon iyaga. AutoSEO waxay isku daraysaa xiriiriyeyaasha xirmooyinkaan xargaha leh 'anchor' si ay u aasaaso xiriiriyeyaasha magacaaga inay yihiin ilo awood leh oo ay weheliyaan ereyadan furaha ah.
Qiimaha nidaamkaan wuxuu ku kala duwanaan doonaa $ 99 bil kasta illaa kudhowaad $ 900 sanadkii. Waxaad dooran kartaa dhererka ololahaaga inuu noqdo bil, saddex bilood, lix bilood, ama hal sano. Marka la barbardhigo, websaydhada kale ee badan ee SEO waxay leeyihiin sicir aasaasi ah $ 1000 ololahooda. Xirmooyinkooda sidoo kale waxay u muuqdaan inay haystaan xulashooyin ka yar.
FullSEO waa nooca horumarsan ee AutoSEO. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya tan iyo AutoSEO waa in aad leedahay maamule Semalt loo xilsaaray kiiskaaga. Maareeyuhu wuxuu la shaqeeyaa khabiirka SEO-ga bilowga, ka dibna wuxuu kuu soo diri doonaa warbixinno joogto ah oo ku saabsan horumarka ololahaaga.
FullSEO waa maalgashi mustaqbalka ganacsigaaga. ROI, ama soo noqoshada maalgashiga, guud ahaan waa qiyaastii 700% iyadoo lagu saleynayo khibradaha macaamiisha hore. 100 kii doolar ee aad kubixiso arrintan, waxaad kasbataa 700 oo laab.
Tusaale ahaan, wakaaladda guryaha ee Meksiko waxay ku dhawaad 700% kordhisay taraafikada, taasoo ku kaliftay inay galaan lambarka koowaad ee dhowr furayaal. Markaad ku jirto booska ugu sareeya ee 724 keywords, waxay u saamaxaysaa inay bartilmaameedsadaan kuwa doonaya inay hanti ka helaan Mexico si fudud. La'aanteed FullSEO, weligood ma aysan arki lahayn heerkan taraafikada.
Isbarbar dhig wanaagsan oo ku saabsan waxa ay shirkadaha kale sameynayaan, waxaan eegi karnaa WebFX. WebFX waxay bixisaa soo bandhigyo cajiib ah oo ku saabsan astaamaha SEO-ga iyo aaladaha falanqaynta. Si kastaba ha noqotee, Semalt waxay leedahay kala duwanaansho dheeri ah oo ku saabsan xulashooyinkooda qiimaha.
Ganacsiyada yar-yar ee leh miisaaniyad yar, tan ayaa ah mid la awoodi karo. Iyada oo la raacayo ikhtiyaarka FullSEO, Semalt wuxuu ku faraxsan yahay inuu kuu helo qiime qaali ah xirmada SEO ee maxalliga ah. Semalt wuxuu doonayaa inuu la shaqeeyo miisaaniyadaada. Baadhitaan deg deg ah ee boggooda internetka ayaa muujinaya ugu yaraan kharashka bil kasta $ 475 bishii.
Waxaad si macquul ah isugu dayi kartaa 14-ka maalmood ee tijaabada ah iyo AutoSEO si aad naftaada ugu fududeyso fikrada tan. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad isticmaasho degel kale, maadaama Semalt uu kuu sheegi doono xirmada sida ugu fiican ugu shaqeyn doonta degel kasta. Si fudud ayaa loo dhigaa, tafaariiqleyaasha kale ma bixiyaan kala duwanaansho la mid ah badeecada ay Semalt leedahay.
Waa maxay E-Commerce SEO?
Semalt waxay siisaa badeecad qaas ah kuwa leh E-Commerce, ama dukaanka internetka, baahiyaha. Xirmadan ayaa la mid ah kuwii horey loo soo sheegay oo waxay ka badan tahay kordhinta waxsoosaarka AutoSEO iyo FullSEO.
Semalt wuxuu bartilmaameedsadaa furayaasha-ereyga-gaaban ee ku saleysan alaabada iyo astaanta. Erayaasha furaha ee aad ubaahantahay inaad darajayso, ama ereyada furaha ah ee ay soo jeedin lahaayeen, waxay diirada saarayaan dadka raadinaya badeecad gaar ah.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad laxiriirto erey gaar ah, “saacadaha raqiis ah ee ragga qaali u eg,” waxaad ogaan doontaa in liisaska hadda jira ay ku jiraan liistada liiska ama fiidiyoowga.
Ganacsiga elektaroonigga ah, waxaad ku ogaan kartaa saacaddaada tobanka liist ama fiidiyowyada ugu sareeya. Iyada oo leh qaar ka mid ah ereyada keydka si fiican loo meeleeyay iyo kor u qaadista SEO, waxaad ganacsigaaga u geyn doontaa isla heerar awood u leh ereygan muhiimka ah.
Waa maxay Falanqaynta?
Falanqaynta waa eray ay adeegsadaan shirkado badan. Google wuxuu leeyahay barnaamij dhan oo loo dhisay si uu ula socdo sida xayeysiimahaaga lacagta ahi ay u socdaan Magaca Google Analytics. Alaabtaani waa wax badan oo ka mid ah AutoSEO iyo FullSEO, oo kaashboonyadu ay la socdaan labadaba wax soo saar.
Qalabka falanqaynta Semalt wuxuu siiyaa macaamiisha kalsooni habkaas oo si fudud looga aqrin karo. Waxay sidoo kale siineysaa Semalt ilo la xisaabtanka, iyagoo ku siinaya caddeyn ku saabsan ololahaagii mushaarka ahaa ee shaqeynayay. Hoos waxaa ku yaal tirokoobyo loogu talagalay dadka adeegsanaya aaladda falanqaynta.
Falanqaynta qotada dheer waxay ku siineysaa awood aad ku kormeerto tartamayaashaada, aad ku garto suuqyada cusub, iyo aad kuhesho ereyada furaha ah ee lagula taliyo in looga faa’iideysto macluumaadkaas. Sidoo kale, Semalt wuxuu kuu oggolaanayaa inaad raadiso jagooyinkaaga wakhti kasta oo maalinta ka mid ah.
Markaad aragto degel ka tegaya HTTP kuna taga HTTPS, kani waa tusaale shahaadada SSL la adeegsaday. Astaantan amni ayaa sirta macluumaadkaaga si ay ugu adkaato haakarisku inay marin u helaan macluumaadka la aqoonsado, sida macluumaadka kaararka deynta.
Waa lagama maarmaan haddii aad tahay websaydhka E-Commerce ama degel ku saleysan adeegga oo kaydiya xog kastoo macaamiil xasaasi ah. Sidoo kale, haddii Google ay u aqoonsato goobtaada inay tahay meel nabdoon, waxay fursad fiican u heli doontaa inay gaadho darajo sare.
Soo Koobid sida Semalt uu kuu caawin karo Adiga oo kujira liiska 10ka ugu sarreeya
Iyada oo leh rikoor raad ah oo la xaqiijiyay, boqolaal macaamiil oo qanacsan, iyo koox khubaro ah oo kala duwan, Semalt waa koox qiime sare leh oo shakhsiyaad diyaar u ah inay kula shaqeeyaan si loo hubiyo inaad ka soo baxdo yoolkaaga
Waxaan aragnay sida AutoSEO, FullSEO, E-CommerceSEO, Analytics, iyo SSL oo dhami ay u leeyihiin faa'iidooyinkooda wadista taraafikada websaydhkaaga. Iyada oo la socota kooxdooda khabiirada iyo maareeyayaasha, waxaad ka heli doontaa ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, iyo dib-u-celinta loo baahan yahay si aad u soo qaadatid websaydhkaaga sare ee Google.